Kidney Transplant – Wecaremyanmar
(ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး Apollo ဆေးရုံမှ Dr. Sandeep Guleria နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း)
အမေး : ကျောက်ကပ်ရောဂါ၏ အဆင့်များကို သိပါရစေ …
Dr. Sandeep Guleria: ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများအရေအတွက် များပြားလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း လူနေမှုဘဝ နေထိုင် စားသောက်မှုပုံစံ၊ သွေးချိုဆီးချိုရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါ စတဲ့ရောဂါများကြောင့် ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေမှုသည် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင် များ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တွင် တွေ့ရသည်။
ကျောက်ကပ်ရောဂါကို ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့်(၅)ဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ပြောလို့ရပါတယ်။
အဆင့် (၁) တွင် ကျောက်ကပ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဆင့် (၄) တွင် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ရာခိုင်နှုန်း အထိ နှင့် အဆင့် (၅)တွင် ကျောက်ကပ်သည် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ကျောက်ကပ်အလုပ်လုပ်နိုင်တော့သည်။
Chronic Kidney disease (နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ) ကို ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့် (၅) ဆင့်နဲ့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ အဆင့်နံပါတ်ကြီးလေ ကျောက်ကပ်ပိုပျက်ဆီးလေဖြစ်သည်။
အမေး : ကျောက်ကပ်ရောဂါကို ကုသနိုင်ပါသလား ? ? ?
Dr.Sandeep Guleria : လူနာ၏ ကျောက်ကပ်ရောဂါအခြေအနေသည် အဆင့် (၁) နှင့် အဆင့် (၂) တွင်ရှိနေပါက ဆရာဝန်အနေဖြင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးရွားမသွားအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်အထူးကုဆရာဝန် (သို့) အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်နှင့် သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ ထို့ပြင် လူနာတွင် သွေးချို ဆီးချို၊ သွေးတိုးရောဂါရှိနေပါက ထိုရောဂါများအတွက်ပါ ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်….
ကျောက်ကပ်ရောဂါအဆင့် (၃)တွင် ရှိနေပါက ကျောက်ကပ်ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကတော့ သွေးအားနည်းရောဂါနဲ့ အရိုး ရောဂါများဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ကျောက်ကပ်ရောဂါအဆင့် (၄)တွင်ရှိနေပါက ကျောက်ကပ်ရောဂါသည် ပြန်ကောင်းဖို့ အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းသွားပြီး အဆင့် (၅) သို့ဆက်လက်ကူးပြောင်းမည့် အနေအထားဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်းကို ပြုလုပ်လိုပါက ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျောက်ကပ်အလှူရှင်ရှာနေချိန်တွင် လိုအပ်ပါက ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်းကို စီစဉ်ထားသင့်သည်။
ကျောက်ကပ်ရောဂါအဆင့် (၅)တွင် ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်း (သို့) ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း (သို့) peritoneal fluid လဲပေးခြင်းဖြင့် သန့်စင်ပေးခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားရပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကအရမ်းပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအဆင့်မှာတော့ quality of life ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆို ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသသင့်ပါတယ်။
အမေး : ကျောက်ကပ်အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ? ? ?
Dr.Sandeep Guleria: အချိုဓာတ်များသောအစားအစာများ စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲတော့ အချို့သောဆေးဝါးများသည် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို မြင့်တက်စေပြီး သွေးချို ဆီးချိုရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လူနာများအနေဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် သုံးလ အကြာတွင် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အမေး : ကျောက်ကပ်အလှူရှင်အနေဖြင့် သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ ကျောက်ကပ်ကို အလွယ်တကူ လှူဒါန်းနိုင်ပါသလား ? ? ?
Dr. Sandeep Guleria : အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ (၁) ဘယ်အသက်အရွယ်ရှိသူတွေအနေနဲ့ လှူဒါန်းနိုင်ပါသလဲ?? (၂) လှူဒါန်းတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်လဲ…နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကရောပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်သလား?? စတဲ့ မေးခွန်း (၂) ခုကို အဓိက အားဖြင့် မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။
အလှူရှင်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ မလှူဒါန်းခင်မှာ လှူဒါန်းသူနဲ့ လက်ခံမယ့်လူနာရှင်ကြား သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ တူညီဖို့နဲ့ အလှူရှင်အနေဖြင့် medical check-up for physical conditions (ကူးစက်ရောဂါများရောဂါရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း) နှင့် psychiatric evaluation (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း) ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ လှူဒါန်းပြီးနောက် အလှူရှင်အနေဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်မတက်စေရန်နှင့် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို ပုံမှန်အတိုင်းထိန်းထားရမည်။ အရိုးရှင်းဆုံးကတော့ ရေများများသောက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : အလှူရှင်အနေနဲ့ လှူလို့ရတဲ့အခြေအနေက ???
Dr.Sandeep Guleria : အသက် ၁၈နှစ်နှင့် ၆၀ ကြားရှိပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းသောမည်သူမဆို လှူဒါန်းခွင့်ရှိပါတယ်။ လှူဒါန်းတဲ့အခါမှာ သွေးအုပ်စုကို အဓိကထားစစ်ဆေးပါတယ်။ ထို့ပြင် cross matching test (အလှူရှင်နှင့်လူနာကို ကျောက်ကပ်လှူလို့ရ၊မရ) စစ်ဆေးပါတယ်။
မေး : ကျောက်ကပ်အလှူရှင်အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ချက်များပြုလုပ်ပေးပါသလဲ ? ? ?
Dr.Sandeep Guleria : အလှူရှင်မှ ကျောက်ကပ်ထုတ်ယူခြင်းကို Laparoscopic Donor nephrectomy or keyhole surgery လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်အလှူရှင်အနေနဲ့ ဆေးရုံမှာ (၅)ရက်လောက်နေပြီးလျှင် မိမိအိမ်သို့ တစ်ပါတ်အတွင်းပြန်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် အလှူရှင်များအနေဖြင့် မိမိအလုပ်တွေပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မေး : ကျောက်ကပ်အစားထိုးပြီးနောက် rejection (အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ကျောက်ကပ်ကို အစားထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှ မိမိခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း မဟုတ်သည့်အခါ တိုက်ထုတ်ခြင်း) တွေကရော ဘာတွေရှိလဲ ? ? ?
Dr. Sandeep Guleria : rejection တွေက ကျောက်ကပ်အစားထိုးပြီး ပထမ (၃) လတွင် အဖြစ်များသည်။ Induction EHS process နည်းလမ်းဖြင့် rejection ကိုလျော့ချနိုင်သည်။ ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်းအောင်မြင်မှုသည် ၉၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်း၏ အားသာချက်များ
✜ ကျောက်ကပ်ဆေးရန်အတွက် သီးသန့်အချိန်ပေးရန် မလိုတော့ခြင်း။
✜ အစားအသောက် အာဟာရကန့်သတ်ချက်များ လျော့နည်းသွားခြင်း။ (ဥပမာ။ ။ ကျောက်ကပ်မလဲမီ ရေကို အကန့်အသတ်ဖြင့် သောက်ရ၍ လဲပြီးပါက ပိုမိုသောက်နိုင်ခြင်း)
✜ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုကျန်းမာလာခြင်း။
✜ အစားထိုးပြီးပါက မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို မကျန်းမာသူတစ်ယောက်အဖြစ် မမြင်တော့ခြင်း။
ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်း၏ အားနည်းချက်များ
✜ မေ့ဆေးဖြင့် အကြီးစား ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရခြင်း။
✜ ခွဲစိတ်ခြင်းကြောင့် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်ခြင်း။ (ဥပမာ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်စဉ် သွေးထွက်လွန်ခြင်း, Rejection ရနိုင်ခြင်း)
✜ အစားထိုးပြီး ခုခံအားချဆေးများကို အမြဲမပြတ်သောက်ရသဖြင့် အလွယ်တကူ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း။
✜ ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သော ဆေးစစ်ချက်များ မကြာခဏ ပြုလုပ်ရခြင်း
” ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်းနှင့်ပက်သတ်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက အပိုလိုဆေးရုံကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ”